Nagu saabsan - Yuhuan WINS Electric Co., Ltd.
Yuhuan WINS Electric Co., Ltd. wuxuu ku yaal Jasiiradda Yuhuan, oo loo yaqaan "Beerta Badda" oo leh muuqaal qurux badan iyo gaadiid ku habboon; shirkaddu waxay qiyaastii 100 kiiloomitir u jirtaa Madaarka Wenzhou, 150 kilomitir ayay u jirtaa Madaarka Ningbo, iyo 300 kiiloomitir ayay u jirtaa Madaarka Shanghai. Shirkaddu waxay dhistay koox cilmi-baaris farsamo oo tayo sare leh iyo hibooyin horumarineed. Badeecadaha waxaa si madaxbannaan loogu qaabeeyey qaab dhismeedka, mashiinnada, iyo mabaadi'da korantada. Iyada oo leh qalab wax -soo -saar oo dhammaystiran, qalab tijaabin ah, khadadka wax -soo -saarka, iyo nidaamyada kontaroolka shabakadda kombiyuutarka, alaabta waa la soo saaraa oo qaybo ayaa la xushay. Iyo wax soo saarka madaxbannaan ee shirka.
Yuhuan WINS Electric Co., Ltd. ayaa ka gudbay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ISO9001: 2000 waxayna aasaastay nidaam maareyn tayo oo dhammeystiran oo ku saleysan heerarkeeda. Jihada horumarineed ee badeecada shirkadu waa in la hagaajiyo tartanka badeecadaha shirkadda ee suuqyada gudaha iyo dibaddaba, soo saaridda iyo horumarinta badeecadaha kala -beddelka sare, cusub, oo casri ah iyo kuwa korantada sare leh, iyo sii wadidda daboolidda baahiyaha warshadaha korontada ee horumarinta qalabka qaybinta korantada sare iyo kan hoose.
Si loo abuuro badeecooyin tayo sare leh, waxaan isku darnaa naqshadeynta badeecada iyo dhaqanka shirkadaha, waxaan sameynaa dadaal joogto ah oo faahfaahsan, waxaanan raacnaa dulucda "naqshad cusub, farsamo-gacmeed wanaagsan, iyo wax ku ool". Waxaan mar walba aaminsanahay in “wada-guulaysiga” uu noqon karo mid wax tar u leh, “daacadnimadu” ay noqon karto iskaashi muddo dheer ah. Isagoo wajahaya imaanshaha xilligii caalamiyeynta, waxaan si diirran u soo dhaweynaynaa saaxiibbada gudaha iyo dibaddaba, ganacsatada u heellan daryeelka aadanaha oo dhan, oo aan ka wada shaqeyno sidii ay gacan uga geysan lahaayeen nolol wanaagsan oo aadanaha oo waafaqsan fikradda “guuleysiga ". awoodda.
Shirkaddu waxay soo bandhigtay qalab dhammaystiran oo tiknoolajiyad aad u fiican iyo khadadka wax-soo-saarka dhismaha, oo leh Jarmal TRUMPF mashiinka goynta laser-ka tooska ah, mashiinka alxanka Panasonic, mashiinka alxanka jarmalka jarmalka, TAILIFL CNC feer, mashiinka foorarsiga AMADA CNC, mashiinka xiirashada hidaha, gaaska Qalabka dayactirka iyo qalabka kale ee wax soo saarka oo aad u fiican; Waxay leedahay hubin sax ah iyo aaladaha tijaabinta sida aaladaha tijaabinta astaamaha farsamada, tijaabiyaasha cadaadiska, qayb
Badeecadaha ugu waaweyni waa: garaad si buuxda loo shaabadeeyey oo si buuxda loo dahaadhay giraanta la buufin karo ee ugu weyn, giraanta adag ee dahaarka leh ee ugu weyn, giraanta dahaarka leh ee dahaaran qaybta ugu weyn, nooca kaabiga furaha xadka isticmaalaha caqliga leh, furitaanka bannaanka iyo xiritaanka caqliga leh, sanduuqa isgoyska fiilada, Box- saldhigyada nooca, korontada sare iyo kuwa hoose ee qalabka dhammeystiran, tiirka furayaasha xadeynta caqliga leh, dibedda jebiyaha wareegga faaruqinta magnetka, dib -u -celiyeyaasha, furayaasha culeyska cufan, cir, switchgear danab hooseeya,. iyo qalabyada Aluminium, guluubka naasaha, Vacuum Circuit breaker, Load break switch